mairie-antananarivo – Fepetra raisin’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny Ministeran’ ny Fahasalamana momba ny “pesta”
auteur 21 septambra 2017 Commentaires fermés
Misy ny fiarahamiasa eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny BMH sy ny Ministeran’ny fahasalamana manoloana ny fepetra tokony horaisina manolona ireo aretina misy eto Andrenivohitra sy ny fahafatesana mampiahiahy . Voaresaka amin’izany ny fisian’ny aretina Pesta. Nanambara ny Talen’ny BMH Herivonina Durand Derys fa tafiditra tsara amin’ny vaindohandraharaha ny Ben’ny Tananan’ Antananarivo Lalao RAVALOMANANA ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahoaka. Araka izany dia nanazava ny Talen’ny BMH fa misy karazany roa ny Pesta dia ny Bubonique izay ahiatana fivontosana sy ny Pesta Pulmonaire izay misy fivotosana miampy aretin’ny tratra. Marihana ihany koa hoy izy fa efa olona iray izao no matin’io aretina io teto Antananarivo Renivohitra. Raha natao ny fanadihadiana momba ny niavian’ izany aretina izany dia niainga avy any amin’ny faritra iray nisy ity olona maty ity io aretina io . Noentina niakatra taty Antananarivo ny razana , avy eo dia maty indray ny vadiny . Mbola nisy maty fahatelony indray taorian’izany izay tsy iza fa ny fianakavian’iretsy maty teo aloha ihany . Fantatra fa nampidirina tamin’ny Hopitaly teto Antananarivo io olona io .
Anjaran’ny BMH no mikarakara ny razana matin’ ny pesta amin’ny fandevenana azy etsy Anjanahary ary nanamafy ny BMH fa tsy azo alain’ny fianakaviany ny razana mandritra ny amam-polotaonany sady tsy azo havadika .Misy ireo Hopitaly mandray ireo olona ahiana ho voan’ny aretina ary entanina ny rehetra raha vao misy tranga hafahafa mba hanatona aingana ny tombim-pahasalama na ny CSB II akaiky azy.Tsy azo atao ny mihinana fanafody tsy nahazoana alalana avy amin’ny Dokotera indrindra ny “cotrime” fa mety hiteraka fahafatesana .
Efa nisy ireo fanentanana eo anivon’ny Boriboritany 6 eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay tanterahin’ny BMH amin’izao fotoana izao .Noho izany dia misy ny fampiantsoana ireo Sefo Fokontany tsirairay ary hamafisina ny tsy fahazoana manary voalavo maty eny rehetra eny fa dorana . Marihana fa ny voalavo “Ratus Ratus” no tena mitondra io aretina io . Mila esorana ny lobolobo rehetra , ny olona maty rehetra eto Antananarivo Renivohitra dia tsy maintsy mandalo BMH mampilaza ny taham-pafatesana sy ny antony nahafaty azy mba hisoroana ny fiparitahan’ny aretina,eo koa ny fampilazana sy fiantsoana ny polisy izay manakaiky ny Boriboritany misy azy . Nentanina koa ny fianakaviana izay manana maty mba hanisy “formol” ny razana mba hikajiana azy ireny sy hiadiana amin’ny aretina mifindra tsy hiparitaka .